Ibhatyi egqunyiweyo, iibhulukhwe zePuffer, ibhatyi eyiHybrid - iSenkai
Ibhatyi yeski kunye nebhatyi yekhephu
I-Insulated And Down Jacket Parka
Ijezi yebhatyi eboyeni
Ibhulukhwe yePuffer kunye neVest
Yangaphandle padding ibhatyi
Abafazi abangatyi manzi ibhatyi yangaphandle 9220306
Inkcazo: Iibhantshi zangaphandle eziprintiweyo zokuhombisa ibhatyi yangaphandle ayinamanzi kwaye ayinamoya. Ukuxhathisa iqokobhe elilukhuni kunye nomphetho opeyintwe ngokupheleleyo kukukhusela ekuvuzeni nasekugcwaliseni. I-100% epholileyo ye-polyester efakwe ngaphandle yabasetyhini ibhatyi yangaphandle ikugcina ufudumele. I-hood ehlengahlengiswayo kunye neekhafu ezinokuhlengahlengiswa kunokunceda ukugcina umoya uphume kwaye uphathe imozulu embi yasebusika ngokulula, njengemvula, amafu okanye usuku lwekhephu. Iipokotho zesandla ezi-2 zilungele ubomi bemihla ngemihla .Iyilungele ukunxiba yonke imihla, njenge-skiing, i-snowboa ...
Ijacket yangaphandle enamanzi ka-9220314
Inkcazo: Ibhatyi yangaphandle engenamanzi kaManzi ifudumele kwaye ingangeni umoya. Ukuxhathisa iqokobhe elilukhuni kunye nomphetho opeyintwe ngokupheleleyo kukukhusela ekuvuzeni nasekugcwaliseni. I-100% epholileyo ye-polyester efakwe ngaphandle yabasetyhini ibhatyi yangaphandle ikugcina ufudumele. I-hood ehlengahlengiswayo kunye neekhafu ezinokuhlengahlengiswa kunokunceda ukugcina umoya uphume kwaye uphathe imozulu embi yasebusika ngokulula, njengemvula, amafu okanye usuku lwekhephu. Iipokotho zesandla ezi-2 kunye nepokotho yesifuba e-1 zilungele ubomi bemihla ngemihla .Yilungele ukunxiba mihla le, njenge-skiing, snowb ...
Ibhatyi yabafazi ibhatyi hybrid ibhatyi 17930
Ijacket yoboya begusha obudala benziwe nge-100% yoboya beglasi obunobuso obuxutywe ngejezi kunye ne-100% yenayiloni, intuthuzelo engenasambuku. Ulwakhiwo lweplanethi yomthungo linciphisa ubuninzi kwaye lunceda ekupheliseni ukutshaja. Ukulungiswa kwehood kunceda ukuthintela umoya uphume. Ilitye okanye uHeather Obsidian, ezi toni zithulisiweyo zisebenza ngayo nayiphi na indlela yokudibanisa onokucinga ngayo. Nxiba okanye uhlale ungaqhelekanga, esi siqwenga sigqibelele nakweyiphi na imeko kunye nokusingqongileyo. Ukucaciswa ...
Ibhatyi kwanele ibhatyi ingenamthungo uziphu pocke ...
Ibhatyi edibeneyo yamadoda yile nto uyifunayo ebusika. Amandla amakhulu okususa ubushushu, nkqu nakwiimeko ezifumileyo. Ukufudumeza okufudumeleyo kunye nokukhanya okuncinci kwe-microfiber kudityaniswe namanzi angaphandle agxothayo-ilungile kunxibo lwemihla ngemihla. Ibhatyi efudumeleyo eneebhendi ezithambileyo ze-hood kunye neekhafu zigcina umoya ungangeni. Idyasi yamadoda yenzelwe kwaye yenziwa ukuba ifumaneke ngokufanelekileyo kwaye isebenze ngokukuko, ikuvumela ukuba wenze okusemandleni akho ngelixa wonwabile ngaphandle ...
Ibhedi yabafazi yangaphandle 8218394 wa ...
Ibhatyi ebiyelweyo yabasetyhini ikugcina ufudumele. Uhlengahlengiso lwesaqhwithi kunye nokuqiniswa kweebhanti ezinamathelayo kunceda ukugcina umoya ungaphandle.Uyilo olutsha lwenza idyasi ibe kumgangatho ophezulu kwaye ijongeka intle, ilungele imisebenzi yangaphandle. Amanqaku: 1. Ilaphu: ilaphu leqokobhe: amanzi agxothayo agutyungelweyo, amalaphu amalaphu: 100% ipholiyesta / uboya. 2.Waterproof & engangenwa: High-zobugcisa ipholiyesta ilaphu kugcina umzimba wakho owomileyo kwaye shushu ...
Ijacket yabasetyhini engenawo amanzi 9220501-2-6
Ibhatyi ebhinqileyo enamacala omoya igcina umoya ungaphandle. Ibhantshi yeebhatyi ezingangenwa ngamanzi zigcina womile kwaye ukhululekile emvuleni nakwikhephu .I-hood efumanekayo enentambo kunye neekhafu ezinokuhlengahlengiswa zongeza ukufudumala .Ukuzaliswa komgangatho ophezulu kukugcina ufudumele .Oku kulungele imisebenzi yangaphakathi nangaphandle. Amanqaku: 1. Ilaphu: ilaphu leqokobhe: amanzi agxothayo agutyungelweyo, amalaphu amalaphu: 100% ipholiyesta / uboya. 2. Ukungena manzi: ibhatyi yasetyhini yasebusika yenziwe ngelaphu elingena manzi elinokuphefumla, kwaye zonke iziphu ...
Idyasi yoboya yabasetyhini I-WARMY
Idyasi yoboya Hlala ufudumele kwaye uhlale umile ngokomelela nakwimozulu embi kule dyasi yobutofotofo. I-Hood kunye ne-Elastic cuffs inokuthintela umoya ukuba uphume. Idyasi yimvakalelo yokuyilwa ekulula ukuyinxiba. Kuyinto eqhelekileyo kwaye ikwabonwa ngokusemthethweni ngokunxiba, yinto enoluhlu olubanzi lokuziqhelanisa. Umdlalo ogqibeleleyo kunye neebhulukhwe zakho ozithandayo, iibhulukhwe ezimnyama, iibhulukhwe ezimnyama, iijini zedenim, njl.
Ibhatyi yamanzi ekhephu manzi yabasetyhini NL0039KI-F
Ibhatyi yeskirt yebhedi yabasetyhini ayinamanzi kwaye ingena moya. Amanzi agxothayo agutyungelwe ngamanzi, amalaphu acocekileyo kunye nelaphu elomeleleyo liqinisekisa ukugcinwa kobushushu obugqwesileyo, Ilwa imvula okanye imozulu enenkungu. Ukususa hood ehlengahlengiswayo kunceda ukugcina umoya uphume kwaye uhlale ukhululekile. Isitayile esikhululwe ngokufanelekileyo ngezinto ezomileyo ngokukhawuleza. Shicilela ilogo ibonisa uphawu kwibhokisi yasekhohlo. Isetyenziselwa ukwehla ekwehliseni i-Skiing, i-Snowboarding, i-Snowsports kunye neminye imidlalo yasebusika yangaphandle. Ukucaciswa ...
Masithathe ukukhula kwethu siye kwinqanaba eliphezulu
Sigqibile kwaye saluphumelela uphicotho-zincwadi lweBSCI kulo nyaka. Sonke siyazi ukuba isatifikethi seBSCI sixhamla kumzi-mveliso: 1.Fezekisa iimfuno zeendwendwe. 2. Isatifikethi esinye se-diff ...
Ukusetyenziswa kwendwangu yecationic
1. Ilaphu le-cationic linamanzi amnandi kakhulu kwaye ukucoceka kwetrank umahluko kuncinci, ke kufanelekile ngokukodwa kwimidlalo yezemidlalo, ikakhulu eyenziwe kwii-sweatshirts, sweatpants, ...
Izibonelelo zelayisensi ebuyiselweyo
Ngokwandiswa kolwazi lwabantu lokhuselo lokusingqongileyo kunye nokuqhubela phambili kwetekhnoloji, amalaphu abuyiselweyo angene kubomi bethu. Inkampani yethu ngoku isebenzisa amalaphu aphinda asetyenziswa ...
Ibhatyi yeskii, Ibhatyi yeski, Ibhantshi yeSki egqunyiweyo, Ibhantshi yeSki yaBantwana, Ibhatyi yeski yama-80, Ibhatyi yesikhumba,